Minisitra Sinoa Wang Yi: Nanamafy ny fanamboarana ilay « Autoroute » -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisitra Sinoa Wang Yi: Nanamafy ny fanamboarana ilay « Autoroute »
Nigadona teto Madagasikara ny sabotsy 7 Janoary teo ny minisitry ny Raharaham-bahiny sinoa Wang Yi. Avy hatrany dia noraisin’ny filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, teny amin’ny lapam-panjakana Iavoloha ity minisitra sinoa ity.
Tsy tongatonga ho azy eto Madagasikara ny minisitra Wang Yi fa avy hatrany dia nandroso sy namelabelatra ireo tetikasa maro ho an’i Madagasikara tamin’ny filoham-pirenena. Mitohy hatrany mantsy ny fiaraha-miasa sy fiaraha-miombon’antoka eo amin’ny firenena malagasy sy ny firenena sinoa.
Raha ny marina, tsy vao izao no nisian’ny fiaraha-miasa sy miombon’antoka eo amin’ny firenena roa tonta fa efa an-taonany maro. Izany hoe, efa maro ireo fotodrafitrasa azontsika tamin’ny Sinoa. Eo ihany koa ny resaka toekarena, sns.
“Autoroutes” miisa telo…
Raha ny fanazavana, anisan’ny nivoitra tamin’ny resaka nifanaovan’ny filoham-pirenena sy ny minisitra Wang Yi ny tetikasa mikasika ilay lalambe migodana na ilay antsoina amin’ny teny vahiny mahazatra “autoroute” miisa telo. Tsiahivina fa efa notontosain’ireo manam-pahaizana sinoa ny volana Jona sy Jolay tamin’ny taon-dasa (2016) ny mombamomba sy mikasika ny fanatanterahana io tetikasa io, ho an’ilay mampitohy an’Antananarivo sy Toamasina. Mbola tsy voafaritra mazava kosa ny mikasika ireo “autoroutes” roa ambiny ho an’i Madagasikara.
Marihina fa anisan’ny singa iray nampihiratra an’i Madagasikara tamin’ny fandraisana ny andiany faha-16-n’ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia ny nanamboarana sy nanomezan-dry zareo Sinoa ireo lalam-baovao “rocades” Ankasina sy Ambohitrimanjaka ary Tsarasaotra.
Ankoatra izay, mbola hisy ihany koa ny fanamboaran-dalana any amin’iny tapany avaratry ny Nosy iny, raha ny voalaza hatrany.
Fitrandrahana rano goavana
Etsy andaniny, anisan’ny tetikasa goavana ho azon’i Madagasikara avy amin-dry zareo Sinoa ihany koa ny fitrandrahana rano goavana any Atsimo na ilay atao hoe “Grand forage du Sud”. Mbola tsy nanambara kosa aloha, hatreto, ny fitondram-panjakana amin’ity fiaraha-miasa amin’ny firenena roa tonta ity ny fanombohan’ny asa. Hivaha tanteraka, araka izany, ary tsy ho ela ny fahasahiranan’ireo mponina amin’iny faritra atsimon’i Madagasikara iny.
Tsiahivina fa efa an-taonany maro no nijalian’ny mponina any Atsimo ary mbola tsy nisy nanome tetikasa mikasika ny fitrandrahana rano ireo fitondrana nifandimby. Tamin’ity fitondrana Hery Rajaonarimampianina ity vao nahavita nanome izany an’iny faritra hanjakan’ny tsy fahampian-drano iny.
Hahazo tombony ity fitrandrahana rano, araka izany, ireo mpamboly. Azo antoka izany ny fambolena sy ny famokarana any Atsimo atsy ho atsy.
Tsy vitan’izay, mba hisokafan’i Madagasikara amin’ireo firenena any ivelany eo amin’ny fivezivezen’ny vokatra, mivoaka sy miditra, hahazo sy hisy ihany koa fanamboarana seranan-tsambo avy amin-dry zareo Sinoa hatrany. Tsy voatery ho seranan-tsambo an-dranomasina ihany fa hatramin’ny seranana amin’ireo lakan-drano hahafahana mampifamezivezy ireo vokatra avy amin’ireo faritra eto Madagasikara ary koa hifandraisana amin’ny any ivelany.
Hanamora ny fanondranantsika sy fandraisantsika vokatra izany ary hanamaivana ihany koa fikarakarana rehetra mahakasika ny tsena ivelany, sns.
Etsy andaniny, hisy ihany koa ny fanamboarana lalamby hampifandray ireo faritra maro eto amintsika.
Marihina fa efa tontosa ny sabotsy teo ihany koa, tetsy amin’ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny malagasy, teny Anosy, ny fifanaovan-tsonian’ny fifanaraham-piaraha-miasa eo amin’ny firenena roa tonta.